I-NY Town Isebenzisa i-Ellicott Dredge entsha Ukubuyisa Amabhishi- ama-Ellicott Dredges
Idolobha laseNew York ukusebenzisa elakho elisha i-Ellicott® Brand dredge ukuvuselela amabhishi ngemuva kwesivunguvungu
Source: Elmontcivic.com / Ibhalwe ngu-Administrator
Umphakathi wasogwini lolwandle ePoint Lookout uhlaselwe yiziphepho zakamuva ze-nor'easter, ulahlekelwe ngamamitha ayi-cubic angama-250,000 esihlabathi ngasogwini lolwandle. Umphathi Wedolobha laseHempstead uKate Murray neSenator Yombuso uDean Skelos bahlanganyele ndawonye esithangamini nabezindaba saseFreeport ukwenza uhlelo lokulwa nokuguguleka kwasogwini. Futhi engqungqutheleni yabezindaba ukwambula idolobha lasolwandle elisanda kuhanjiswa, elatholwa ngoxhaso lukaSenator Dean Skelos / Assemblyman Harvey Weisenberg, kwakungu-Councilwoman Angie Cullin, Town Clerk Mark Bonilla, Receiver of Taxes uDon Clavin kanye nabaholi bendawo nezomphakathi. . I-dredge izothatha isihlabathi ezindaweni zokuqongelela bese iphampa okokusebenza emabhishi endawo anciphile.
"Lokhu kudalwa okusha kubalulekile ekulweni nokuguguleka kogu nokuvikela amakhaya endawo, amabhizinisi kanye nabahlali," kusho uMurray. "Ngifuna ukubonga uSenator uDean Skelos ngokuthola imali yokuxhasa le nsimbi ebalulekile."
IHempstead Town ithathe ukulethwa kwedredge, ezohlanganiswa njenge-erector esethwe ezinyangeni ezimbalwa ezizayo ukulungiselela ukwethulwa kokuqala kwentwasahlobo. Eqinisweni, uMurray noCullin basize ukubopha amanye amabhawodi okuqala njengengxenye yomhlangano wesikebhe.
IHempstead Town ingesinye sezindawo zomasipala abangabanikazi bendawo esemaphakathi nendawo yokubuyiselwa kwamabhishi. I-dredge, isikebhe sokusebenza kanye ne-8,000 izinyawo zamapayipi okuhambisa nokupompza isihlabathi zithengiwe ngo- $ 1.14 million. USenator waseNew York State uDean Skelos uthole u- $ 1.1 million wokuthenga okuthe xaxa futhi leli dolobha lafaka enye imali engu- $ 41,000.
"Ukudonswa kolwandle eHempstead Town kuzoba wusizo olukhulu emphakathini wasePoint Lookout," kusho uSenator Skelos. "Njengoba sinemishini efanele yokubuyisa isihlabathi emabhishi ethu nokuqinisa izindunduma zesihlabathi, sizokwazi ukuvikela kangcono abahlali, amakhaya namabhizinisi ezinsongweni zeziphepho nokuguguleka kogu."
Selokhu amabhishi ePoint Lookout agcinwa ukubanjwa ngoMashi 2008, amamitha aphakathi kwama-50 nama-75 olwandle alahlekelwe ukuguguleka. Esikhundleni sokuncika kwi-US Army Corps of Engineers ukugcwalisa amabhishi, idolobha manje selizokwazi ukubhekana nezinkinga zolwandle ngokushesha nangokubanzi.
"Lokhu kuwusizo olukhulu emphakathini wasePoint Lookout," kusho uMkhandlu uCullin. "Amakhaya endawo namabhizinisi azovikelwa kangcono ezinsongweni zeziphepho nasezingozini zezikhukhula ngokubuyiselwa komhlaba nokubuyiselwa kwesihlabathi manje esizokwazi ukukwenza ngqo."
Ngaphambi kwephrojekthi ye-Army Corps of Engineers kaMashi ka-2008 eyamisa iJones Inlet evinjiwe futhi yafaka isihlabathi esimanzi emabhishi asendaweni, amanzi olwandle olwandle ayephule izindunduma futhi agelezela ezitaladini zokuhlala ePoint Lookout. Lo dredge uzovumela idolobha ukuthi libhekane nezidingo ezibucayi, kufaka phakathi nokuqinisa izindunduma ukuvimbela ukwephulwa. Izindunduma zesihlabathi ziyindlela yokugcina yokuzivikela phakathi kolwandle nolwandle lwendawo, izakhiwo nemigwaqo, futhi ukuzinzisa izindunduma kubalulekile ekuvikeleni izimpilo nempahla yomphakathi wasolwandle. Ngokwengeziwe, lo dredge uzosiza imizamo yedolobha ukweseka iProjekhthi Yokunciphisa Isiphepho Esishintshiwe yokuvikela imiphakathi yaseLong Beach Island ekuqubukeni okukhulu kwesiphepho kanye namagagasi ngokwakha izindawo ezintsha zokuqinisa nokuqinisa ezikhona.
Idolobhana lilindele ukumba isihlabathi ukusuka ohlangothini olusenyakatho-mpumalanga yePhoyintiout ukuya empumalanga nengxenye eningizimu-mpumalanga yomphakathi olwandle olwandle phakathi kwezinye izindawo. Ukwehla kulindeleke ukuthi kusebenze isizini yentwasahlobo ye-2010.
“Kwesinye isikhathi ukudonsa 'izinto ezindala' kungaba yinto enhle, futhi isihlabathi esizosusa eziteshini zendawo ukugcwalisa kabusha indawo yasolwandle ehlaselwe yisiphepho yinto enhle kakhulu kubahlali basezilwandle nabaninimabhizinisi,” kuphetha uMurray. "Ngifuna ukubonga uSenator Dean Skelos kanye noMkhandlu wase-Assembly uHarvey Weisenberg ngokuthola izimali zalolu daba kanye nabahlali bendawo ababengabalingani bethu ekulweni nokuguguleka kogu."
Ishicilelwe kabusha kusuka ku-Elmontcivic.com
Qala Iphrojekthi Yakho Yokuvuselela Ibhishi Nge-Ellicott